Peji 3 - 5 WWE Superstars vakaita izwi rekuita - Wwe
5 WWE Superstars vakaita izwi rekuita
# 3: Mick Foley seDombo - Avatar: Yekupedzisira Airbender
Mick Foley (kurudyi) naHulk Hogan
Muhupenyu, zvinhu zviviri zvine chokwadi chekuitika gore rega rega. Chekutanga ndechekuti WWE ichatanga Mugwagwa unoenda kuWrestleMania kuRoyal Rumble. Yechipiri ndeyekuti Netflix ichaburitsazve iyo yakasarudzika yechinyakare animated akateedzana Avatar: Yekupedzisira Airbender ichikonzera iyo internet kuti irasikirwe pamwe chete pfungwa.
Nezve zvekupedzisira, vateveri vakaoma vanopokana nguva dzese pachiitiko chipi chakanakisa uye anokwikwidza akasimba mumakakatanwa ese Mwaka 2 Chikamu 6: Bofu Bhanditi '. Fans dzakaziviswa kuna Toph, bofu mwana wepasi bender akaberekerwa kumhuri yakapfuma uye achizvishongedza semhare wepasi rose wePasi Bending based based wrestling kusimudzira. Ichi chiitiko zvakare chine mukayfabe anokwikwidza weToph anonzi The Boulder. Zvakanga zvichitaurwa panguva iyo Nickelodeon aida WWE megastar Dombo kuti riite iri basa. Zvisinei, izvi hazvina kumboitika.
Pane kudaro, ivo vagadziri vakakanda hardcore ngano uye WWE Horo yaN Famer Mick Foley, uyo akarovera kuita kwake. Kugamuchira Randy Savage chimiro raspy kurira uye kuendesa mitsara yake yese kunge 1980s cliche, kuratidzwa kwaMai Foley kwaBaby Boy kwechimiro kwakatambirwa zvakanyanya zvekuti akaonekwazve kumagumo eSeason 3 mune yekupedzisira nhambo yakanzi Sozin's Comet Part 4: Avatar Aang.
KUMASHURE MBERI 3/5 ZVINOTEVERA
kufunga sei kunze kwebhokisi
mweya wekare mumuviri wechidiki
sei kupedza shamwari ine mabhenefiti hukama
kuraira kuremekedza muhukama
zvaunofanira kuitira vakomana vekuberekwa zuva rekuzvarwa
ane makore mangani lil durk